Pikantsarin'ny fampisehoana perimeter Led, Perimeter tarehimarika, Perimeter Led Boards, mpanamboatra tselatra voatondron'ny mpanondrana ao Shina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Led Perimeter Screenshot,Miseho ny Perimeter Led,Perimeter Led boards,Pikantsarin'ny fampirantiana Led Banner,,
Home > Products > Fampisehoana LED Perimeter
Fampisehoana LED Perimeter
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana LED Perimeter , mpanofana manokana avy any Shina, Led Perimeter Screenshot , Miseho ny Perimeter Led mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Perimeter Led boards R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny fampirantiana LED Stadium dia natao manokana Ny vokatra fampisehoana LED araka ny fepetra takiana manokana amin'ny kianja, izy io dia ampiasaina amin'ny feon'ny kianja sy ny fampahalalana momba ny dokam-barotra. Iray amin'ireo endrika dokambarotra tsara indrindra izy io. Manodidina ny fampahalalana...
Ny efijery fampisehoana efitrano ivelany nampiasaina eo amin'ny sehatry ny baolina kitra, kianja filalaovana basikety ary toerana fanaovana fanatanjahantena hafa. Izy io no fitambatra tonga lafatra amin'ny maoderina fanatanjahantena sy raharaham-barotra lalao mahafinaritra sy ny lalao tsingerin'ny...
Shina Fampisehoana LED Perimeter mpamatsy
Ny efijery fampivoarana ivelany ivelan'ny Perimeter LED dia zana-baravarana dokambarotra perimeter. Izy ireo dia fampisehoana LED ivelany any ivelany izay ampiasaina ho toy ny fampisehoana sorabaventy ambaratonga any an-tany izay midadasika be ary somary fohy ny haavony. Ny zana-baravarankely misy takelaka LED dia matetika ampiasaina amin'ny dokam-barotra ary mahomby amin'ny fampisehoana hafatra mitohy fitadiavana sary amin'ny fisehoana LED manerana ny sehatry ny fanatanjahan-tena sy amin'ny kianja fanaovana fanatanjahan-tena anatiny. Izy ireo dia mailaka haingana sy tsotra mba hametrahana ary mamela ny modely miova amin'ny zoro samy hafa izy ireo hahazoana valiny tsara amin'ny fahitalavitra. Ireo fampisehoana ireo dia ampiasain'ny manampahefana ao amin'ny kianja sy ny klioban'ny fanatanjahantena, orinasa mivarotra ara-panatanjahantena izay afaka mahazo tombony amin'ny fiverenany azon'izy ireo miditra amin'ny alàlan'ny fidiram-bola novokarina nandritra ny lalao. Amin'ny alàlan'ny zoro fijerena mivelatra be dia be, ny fampisehoana LED ivelany ivelany dia mampitombo ny habetsaky ny mpijery, ary koa ny fampisehoana dokam-barotra marobe. Ary koa mask masira Silicon eo amin'ny kabinetra LED sy ny satroka fiarovana ambony dia manome fiarovana ny mpilalao & efijery.
Ny fampisehoana LED Perimeter izay nitarika dia azo amboarina amin'ny habeny samihafa ary nofenoina ny rafitra fanaraha-maso feno, ny fahefana sy ny fizarana data, tariby ary tena manan-danja indrindra amin'ny rindrambaiko fitantanana dokambarotra. Izy ireo dia fitaovana famelomana haingam-pandeha avo lenta azo ampiasaina ho an'ny fangatahana ivelany any ivelany. Ny ekipa injeniera In-trano dia hanome anao fanampiana ara-teknika, fanampiana ary fikojakojana.
Led Perimeter Screenshot
Miseho ny Perimeter Led
Pikantsarin'ny fampirantiana Led Banner
Led Mesh Screenshot